IBlue Warface Hack Hack Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Luhlaza Warface kugula
IWarface Blue lelona qhinga lethu lokuziqhatha leWarface okwangoku!
Fumana ukufikelela kwezona hacks zintle zeWarface kwaye awusoze uphulukane nelinye idabi. Thenga imveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Yiva amandla e-Warface Blue yokuqhekeza ixesha elingaphezulu kosuku. Thenga isitshixo semveliso yeveki e-1 namhlanje!
Ngaba ujonge elona xesha longezelelekileyo lokusebenza ne-Warface hack yethu? Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Nangona zininzi ezinye izixhobo kwintengiso ezibanga ukuba zikuguqule zibe yinkosi yeWarface, zimbalwa kakhulu kuzo eziza kusebenza njengale. Sebenzisa iWarface Blue ukufumana umda kumchasi wakho nakweyiphi na imeko, nokuba zikhona kangakanani na izakhono abanazo!
Ulwazi lweWarface eBlue
Abasebenzisi beWarface abanaso isixhobo esithembekileyo sokusebenzisa ixesha elide, kodwa sijonge ukuyitshintsha apha kwiGamepron. Sifuna ukuvelisa isixhobo apho bonke abasebenzisi bethu banokubuyela emva xa befuna kakhulu okanye enye abanokuyisebenzisa xa bebonke kwimidlalo yabo. Nokuba ufuna ukuqhekeza ngokufihlakeleyo okanye utshabalalise nabani na omi endleleni yakho, ukusebenzisa iWarface Blue hack kuya kukuvumela ukuba ukufezekise. Inani leempawu zodwa kufuneka lanele ukufumana umdla wakho, ke ungaphoswa.
Utshaba lwe-ESP kunye nolwazi lukhona kwesi sixhobo, ekuvumela ukuba ubone impilo, umgama, amagama kunye nezixhobo. IWarface Blue aimbot yethu ibonakaliswe ngokupheleleyo, kubandakanya isangqa se-FOV, ukuKhangela kokuBonakala, uKhetho lweThambo, iiNjongo ezininzi zeNjongo, kunye nemowudi yethu ekhethekileyo ye "Silent Aim". ICrosshair kunye nePanic Key zikhona!
Ulwazi lotshaba (impilo, umgama, igama, izixhobo)
I-aimbot ehlengahlengisiweyo ye-FOV kunye nokugudileyo
Malunga neWarface Blue
IWarface Blue ingaphezulu kwe-Warface cheat yakho, njengoko sikwazile ukubandakanya zonke ezona zinto zibalulekileyo kuwo. Esi sisixhobo esiguqukayo esibonelela ngaphezulu kwe-aimbot enamandla, njengoko imisebenzi ye-ESP ingcono kunangaphambili. Akunyanzelekanga ukuba uzibuze ukuba ngaba kukho ingozi elele kwelinye icala lodonga kwakhona, kwaye ukuba ikho, iWarface aimbot iya kujongana nabo. Ukuxhotyiswa nge-HWID Spoofer, obu buqhetseba bunokusetyenziswa nangabo bangama-ID e-Hardware okwangoku abavaliweyo! Khubaza ukhuseleko kunye ne-anti-virus ngaphambi kokumilisela le ngxaki, kuba umnqweno awuzukusebenza ukuba awenzi njalo.
Kutheni usebenzisa iWarface Blue ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
I-Gamepron ibeka umsebenzisi ngaphambi kwayo nayiphi na enye into, yiyo loo nto sibonelela ngezona ziphumo zibalaseleyo ngelixa kusiko. Ezinye izixhobo zizokubeka emngciphekweni wokuvalwa kwakhona, akunjalo apha - sivumela kuphela iihacks ezingafunyanwanga ukuba zenze iindlela zazo ezandleni zabasebenzisi bethu! Ukuba uthenge i-hack kwi-Gamepron, ungayisebenzisa ngokuzithemba. Ukuvalwa akusengomcimbi xa utyhoboza ngeWarface Blue, kwaye ungadlala kwimowudi esigcweleyo ngelixa ukukopela kusasebenza! Ngamava omsebenzisi asemagqabini, ayikho enye indawo onokuya kuyo ngaphandle kweGamepron.
Uhlengahlengiso lelona candelo liphambili lokuba ngumkhangeli olungileyo, njengoko kuya kufuneka uguqule useto kwaye ucime ngexesha lomdlalo ukuze usebenze ngokugqibeleleyo. Xa ufuna ukuhlala ungumbulali ngobuqhetseba, ukuqonda ubugcisa "bokutshintsha" kufuneka! Xa usazi ukuba ungalubulala utshaba, zive ukhululekile ukukhubaza i-Warface aimbot kwaye uzikhuphele ngokwakho! Unokukhubaza iinketho ezithile ze-ESP ezingasafunekiyo, zikunike ulwazi oluncinci lokukhathazeka malunga nescreen. Lungisa ubungakanani be-FOV Circle yakho, ukuBekwa phambili kwamathambo, okanye nayiphi na into enxulumene nokuqhekeka kweWarface Blue usebenzisa imenyu yethu yomdlalo ophunyezwe ngokugqibeleleyo.
Q1. Zeziphi ii -apps zangaphandle ekufuneka uzifakile ukukopela?
A1. Kubalulekile ukuba ukuGqithisela ukwahlulahlula kube nako ukubhalwa.
A6. Ewe ungadlala kwimowudi yesikrini esigcweleyo.
Abanye abadlali baya kuba neentloni ekusebenziseni iihacks kuba bexhalabile malunga nokuvalwa, kodwa oko akunakwenzeka apha. Zonke iinkohliso zethu azibonakali ukugcina abasebenzisi beMidlaloPron bekhuselekile.
Ingaba ulunde ntoni? Fumana ukufikelela kwaye uqalise ukuphumelela imidlalo emininzi namhlanje!
Ilindelwe Lawula ngeWarface Blue Hack yethu?